Maroodigii Oo Soo Rogaal Celiyay
Marka laga hadlo ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxaa si gaar ah loogu xasuustaa gobolka Jubadda Hoose ee ay magaalo madaxdiisu tahay Kismayu. Gobolkani wuxuu soo saaray ciyaartooy tiro badan oo heerka kowaad iyo qarankaba aad loogaga qadarin jiray wuxuu kaloo caan ku ahaa calankii cagaarnaa ee uu maroodiga kubadda laadaya dhexda ugaga yaalay, waxaa u sii dheeraa inuu gobolo badan baray halku dhegyo ay ka mid yihiin, “ Ciyaari waa galin dambe, waa inoo sannadka dambe, san ka dhuudhi, waa sixiroolayaal, iwm”.
Liiskan hoose ee heerka kowaad Xamar ka ciyaaray ayaa haddaba beeninaya sixir iyo wixii la halmaala:
Abdulqadir (Qariidi- Best Coach), Aweys Juungalo, Ahmed Saqir (AUN), Abdiaziz Gulta, Cafiif, Binshakir, Shaash, Simba, Zaciimu, Abshir Shire (Bide), Baazuweyd, Garaar, Ali Yare, Digri Haji, Jaahur, Cumar Cadami, Diini Nur, Salad Shino, Abdalla Salimow, Ali Cubeyd (AUN), Khalif Da’uud, Abdinasir Haji, Somaliyow, Khalif Rike, Cumar Gedo, Abdinur (Waxool), Omar Jilde, Hassan Khadar, Abshir Xareed, Abdisamed, Ali Darbo (AUN), Ahmed Osman Gedi, Abdi Ismail, Loolow, Aweys Kismayu (AUN). Wuxuu gobolku soo saaray taageerayaal heer qaran ah oo ay ka mid yihiin: Jeesow, Moosow, Shabateey, Mama Saciido, Franco, iyo kuwo badan oo kale.
Waxaan liiskan kuugu darayaa kuwa diiday inay Xamar u soo wareegaan sida:
Diili Mahadi Diili, Barkaan, Sanja, Abdulahi Big, Kuzungu, Saciid Galti, Ciise Ruush, Mohamed Muse Jabroos, Abdi Xaq, Mahamadi, Cumari Faruur, Mohamud Yare, Dumay (AUN), Abdiwahid Timo Faras, Cumari Kiyawe, Afcadey, Murjan, Mohamed Sharif, Abdulahi Goon, Abdirahmen Sharif, Cabey Bidaar, Kata, Abdi Gabow iyo kuwo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin.
Haddaba sannadkan 2013 waxaa magaaladda Kismayu ka socday tartamo isdaba joog ah oo loo dhigayey dhallinyaradda tiradda badan ee xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta. Waxaa kaloo jira tababaro sitimaanaddii ugu dambeeyey la siinayey xulka ciyaartooyda Gobolka Jubadda Hoose oo ay hadda gacanta ku hayaan Macalimiinta kala ah Sanjo, Abdi Gabow, iyo Abdi Xuurow. Waxaa kaloo garab socda tababaridda dhallinyaro yar yar oo mustaqbalka 5 ta sanno ee soo socota loogu talo galay oo ay gacanta ku hayaan Macalin Kata, Abdirahman Sharif iyo ganacsade Carabey oo la garab taagan taageero dhaqaale oo lagu horumarinayo caruurta mustaqbalka.
Maamulka Isbortiga heer degmo iyo mid gobolba ayaa har iyo habeen u taagan sidii looga mira dhallin lahaa dadaaladda tiradda badan ee gobolka ka socda: Waxaa arkaysaa guddoomiye Yahye oo gaaf wareegaya garoonka uu tababarku ugaga socdo labadda gobol ee Jubadda Hoose iyo Dhexe, Jubadda Dhexe ayaa waxa hadda laylinaya Mohamed Sulub iyo Adan Abdi Geedi. Xoghaye Timo-Jilic ayaad arkaysaa sida uu ula dhcsan yahay hawsha ka socota garoonka, Guddoomiye ku-xigeenka Adan Sanka ayaan kaftamaynin galab kastana garoonka ku soo daadiya kubaddihii, CONES kii iyo biyo waxaana si fiican u agaasima Jamaal.
Guddoomiyaha Sports ka Degmadda waa Biibaayee ayaanan meesha ka maqnayn mararka qaarkoodna aadba isleedahay wuuba yaryahay ee muu gobolka u ciyaaro xirfaddii way ku dambeysaaye. Macalin Sharif oo ahaa tababarihii Garowe gobolka geeyey ayaan maalin qura ka maqnaanin laylinata ciyaartooyda. Waxaa isaga xusid mudan guddoomiyihii hore Sports ka Abdulahi Big oo leh “ Ha daalina walaalayaal ee geediga wadaay.” Duq Diili, Burhan, Aweys, iyo Xaaji ayaa guubaabo joogto la garab taagan maamulka Sports. Horjoogaha garsoorayaasha Mr. SLA iyo saaxiibadiisa kala ah Abdul, Maxadow, Maslax, Jamal, iyo laacibkii hore ee Munishiibiyo Kismayu Aweys Eco ayaa ah madaalayaal khibrad sare u leh garsoorka ciyaaraha KAFTANNA ma galaan ee ka carar RED CARD ka SLA.
Waxaan sinaba lagu hilmaami Karin Dr. Abdisamed Abicar Haji iyo Qurba-joogta Sports ka Gobolka oo uu guddoomiyahoodu, Eng. Abdisamed Sheik-Qasim, Kismayu u joogo hawlaha horumarinta Sports ka, Waxbarashadda, iyo Caafimaadka oo ay qayb laxaad leh ka qaadanayaan jaaliyadda qurba-joogta ee gobolka.
Waxaan u mahadcelinaynaa tifatiraha website ka www.xiddigaha.com iyo journalka Somali Canadian Times Mr. Mohamed Busuri.